MDC Yopumha VaChombo Huroyi paNyaya yeMakanzura ekuChitungwiza
Kukadzi 12, 2010
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai iri kupomera gurukota rezvematunhu, VaIignatius Chombo, mhosva yokupindira mumafambisirwo ebasa mukanzuru yeChitungizwa pamwe nemamwe makanzuru munyika yose.
Izvi zvakataurwa nemutevedzeri wemunyori mukuru webato iri, VaTapiwa Mashakada, pamusangano wavakaita nevatori venhau neChishanu mushure mekudzingwa kwakaitwa mubato iri, makanzura ekuChitungwiza neChina.
VaMashakada vanoti vachasvitsa chichemo chavo kuna VaChombo kuti vasatambire makanzura akadzingwa mubato nebato ravo. VaMashakada vanoti sezvo munyika muine hurumende yemubatanidzwa, bato ravo rinofanirwa kutaurirana neZanu PF panyaya yekanzuru yeChitungwiza.
Asi bepanhau reHerald rinoti VaChombo havasi kuzotambira nyaya yeMDC pamakanzura aya, sezvo makanzura aya akasarudzwa nevanhu vemuChitungwiza kuti vapinde mukanzuru iyi.
Vachitaurawo pamusangano uyu nevatori venhau, mutauriri we MDC, VaNelson Chamisa, vakati kusawirirana kuripo pakati pe Zanu-PF ne MDC munyaya dzenhaurirano, kwakwira makata zvokuti zvava kutoda sangano re SADC kuti ripindire.
VaChamisa vanoti hapana chiri kufamba munhaurirano idzi, kunyange hazvo chipangamazano chemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vachiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muhurumende yemubatanidzwa.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vave kushora MDC nekuramba ichiti yave kuda zvesarudzo uye kuti SADC ipindire, asi ichiramba iri muhurumende yemubatanidzwa.
VaMsekiwa Makwanya vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. VaMakwanya vanoti MDC haichaziva pfumo rovabaya ndokusaka vongotaura zvakasiyana siyana.